Hadalo xambaarsan xanaf oo warbaahinta laga sheego ma dimuqraadiyad baa? - Worldnews.com
Hadalo xambaarsan xanaf oo warbaahinta laga sheego ma dimuqraadiyad baa?
Oday Dhaqameedka Beelaha Bariga Burco oo ka jawaabay Hadalo xanaf & Xajiin badan oo ka ...
Oday Dhaqameedka Beelaha Bariga...
Qaran News 2018-01-06
Xaggee baa laga keenaa kalluunka Berbera laga cuno?
27 Agoosto 2017...
Dood Cilmiyeed lagu soo bandhigay Cilmibaaris laga sameeyey wada shaqeynta warbaahinta iyo hey’adaha amniga
Muqdisho, 22 May 2017 – Dood Cimiyeed ku aaddan sida ay u wada shaqeyn karaan hey’adaha ammaanka iyo warbaahinta ayaa lagu soo bandhigay cilmibaaris ay sameeyeen Machadka...
Daawo:Saleebaan Gaal oo si adag uga jawaabay Hadallo xajiin & xanaf badan oo ka soo ...
Qaran News 2017-07-04
Soo saaraha wargeyska New York Times ayaa uga digay Madaxweyne Trump in weerarka uu ku hayo saxaafadda in uu yahay mid khilaafka sii badinaya oo halis ku ah Maraykanka. A G...
Madaxii warbaahinta Aqalka Cad ee Mareykanka oo xilka laga qaaday
Agaasimihii warbaahinta Aqalka Cad Anthony Scaramucci ayaa shaqada laga cayriyay kaddib wax ka yar 10 maalmood oo uu xilkaasi hayay. Scaramucci ayaa la kulmay cambaareyn...
Agaasimihii warbaahinta Aqalka Cad Anthony Scaramucci ayaa shaqada laga cayriyay kaddib wax ka yar 10 maalmood oo uu xilkaasi hayay. Scaramucci ayaa la kulmay cambaareyn kaddib markii uu u yeeray weriye kaddibna uu jeediyay khudbad dheer oo uu ugu gafay dadka ay isla shaqeeyaan. Agaasimihii madaxtooyada Aqalka Cad Reince Priebus iyo...
Warbaahinta qaarkeed oo laga mamnuucay shirarka aqalka cad
Qaar ka mid ah hay'adaha warbaahinta ugu waaweyn ayaa laga mamnuucay inay ka qayb galaan shirarka jaraa'id ee aqalka cad. BBC-da, wargaysyada The New York Times iyo Los Angeles Times, Tv-ga CNN, iyo tiro hay'ado warbaahineed ah ayaan ka qayb gali doonin shirarka saxaafadda ee aan la duubin iyo kuwa la...
Jamal Khashoggi: Madaxa Qaramada Midoobay oo dalbaday in \_'runta\_' laga sheego weriyaha Sucuudiga ee Turkiga ...
Madaxa Qaramada Midoobay ayaa waxa uu dalbaday in "runta laga sheego" weriyaha u dhashay dalka Sucuudi Carabiya, Jamal Khashoggi, ee la la'yahay. Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa BBC-da u sheegay inuu ka cabsi qabo inay joogto noqoto in sidaas oo kale dad kale loo waayo misana ay caadi iska noqotaba. Mr Khashoggi, oo ka soo horjeeday dowladda Sucuudiga,...
\_'Dimuqraadiyad cusub oo ka curatay\_' Zimbabwe
Hogaamiyaha lagu wado in uu qabto xilka madaxwaynanimada Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa bogaadiyay dimuqraadiyadda cusub ee ka dhalatay dalkaasi. Mr Mnangagwa ayaa dib ugu soo laabtay dalka Zimbabwe si uu u badalo Robert Mugabe oo xilka ka dagay. Waxa uu wacad ku maray in uu shaqooyiin ka abuuri doono dalkaasi oo dadka ku nool 90% ay yihiin shaqo la'aan. "Waxa aan doonaynaa...
Wasiirka Warfaafinta iyo Hanuuninta Dadweynaha ee Xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng. Yarisow) iyo wafdi uu hogaaminayo oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Kampala ee xarunta Dalka Uganda ayaa halkaasi ......